महामारीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, के-केकाे बढ्यो भाउ ? « Salleri Khabar
महामारीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, के-केकाे बढ्यो भाउ ?
२ जेठ, काठमाडाैँ । कोरोना महामारीका बीच दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै उद्योगी, ठूला व्यापारी, र बिचौलियाहरूले चामल, तेल, दाल, गेडागुडी, चिनी र अण्डालगायत खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।